साह्रै दर्दनाक घटनाहरु सुनाउनुभयो! माओवादीहरुसंग न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि बाँकी छैन जस्तो छ। अल-काईदा र अन्सर-अल-सुन्नालाई माथ गर्छन् उनीहरु! मान्छे यति निर्दयी र हिँस्रक पनि हुन सक्दो रहेछ!
मान्छे हरु यो हद सम्म क्रुर हुन सक्छ !
यस्ता घोर अपराधीक क्रुरता को सबै पक्ष ले घोर निन्दा गर्नु पर्छ ।
I just want to say maoist are idiot.
जंगलिहरु लाई मानवियताको के ज्ञान ?
जंगल बाट जन्मेको बिचार जंगल बाट नै
अन्त्य हुने पक्का पक्की छ ।
भारतले आतंककारी सुचिमा राखेर अब राम्रै औषधी गर्दै छ भारतीय माओवादीहरुलाई । नेपालमा पनि त्यस्तै हुने छ । हतियार प्रमाणिकरणको नाममा अमेरिकाले माओवादीको १३ हजार सोझा जनता र झंडै ८ हजार सक्कली माओवादीको फोटो खिचेर राखेको छ । अन्त्यमा तिनिहरु लाई नै फिता लगाउन सुरु हुने छ । यो डांका पार्टिको पछी लागेर अरुलाई त मारे मारे आफु पनि सिद्धिने भय बिचरा । हेर्दाइ जानु होला अझ २ बर्ष पछी माओवादीको गांउ तिर बिउ भेट्नै गाह्रो हुने छ ।
नेपाल मा के गर्नु पर्ला त ?
माओवादीलाई आतंकवादी संगठन घोषणा गर्दै औपचारिक रुपमा प्रतिबन्ध
भारतीय केन्द्रीय सरकारले विद्रोही माओवादीलाई आतंकवादी संगठनको घोषणा गर्दै औपचारिक रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । माओवादीलाई राजनीतिक शक्तिका रुपमा लिँदै उनीहरुविरुद्ध राजनीतिक प्रतिरोध नै गर्नुपर्ने भनी प्रतिबन्धको विरोध गर्ने बामपन्थी दलहरुको समर्थनबिनै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिनापछि यस्तो निर्णय भएको हो । माओवादीलाई गैर कानुनी गतिविधि रोकथाम कानुनअनुसार आतंककारी सूचीमा सूचीकृत गरी प्रतिबन्ध लगाइएको हो । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी भारतको प्रमुख माओवादी संगठन हो । भारतका ३४ वटा संगठनलाई आतंकवादी संगठन सूचीमा राखिएको छ । यो निर्णयले हि‌सात्मक गतिविधिमा सकि्रय नभएका माओवादी पार्टीका सदस्यलाई पनि अधिकारीले पक्राउ गर्न सक्छन् । विद्रोहीबिरुद्धको संघर्ष अहिलेसम्म राज्य प्रहरीले मात्रै गर्दै आएको थियो । अहिलेको घोषणाले भारतको पूर्वी मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्रमा फैलिदै गएको माओवादी विद्रोहीविरुद्धको संघर्षका लागि सेना बोलाइनसक्ने संकेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले माओवादीहरुलाई भारत स्वतन्त्रपछिको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक सुरक्षा चुनौती रुपमा ब्याख्या गर्दै आएका छन् ।
स्याङजाकै अर्को घटनाका पिडीतलाई भेटेको थिएं केहि वर्ष पहिले । घरायसी रिसइवीको कारण माओबादीको कमाण्डर भनाउदो ठिटाले आफ्ना बटालियनका अरु "कामरेडहरु" उठाएर लिएर आएर एकजना गाऊंले वृद्धको दुवै खुट्टा कामै नलाग्ने गरी थिलो थिलो पारिदिएका थिए उनको घुंडा भन्दा मुनीको भाग मैले भेट्दासम्म चलेको थिएन ।
त्यसैले माओबादीको क्रान्तिले देश बनाउंछ भन्ने सपना कसैले देख्छ भने मेरो सुझाव छ कामरेडहरु वा कामरेडवादीहरुले फेरी क ख रा पढ्न १ क्लास देखि प्राइमरी स्कुलमा भर्ना हुंदा हुन्छ ।